UTORRENT: OHERE GERE EDERE NA DISK - UTORRENT - 2019
Ọ na-esiri ọtụtụ ndị nne na nna ike ịchịkwa omume nke ụmụ ha na kọmputa karịa ka a na-emegbukarị ndị nke a, na-etinye oge dị ukwuu na egwuregwu kọmputa, saịtị nleta na-adịghị akwadoro maka ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ, ma ọ bụ na-eme ihe ndị ọzọ na-emetụta nwa ahụ ma ọ bụ na-egbochi ọmụmụ ihe ha. Ma, ọ dị mma, na kọmputa na-agba Windows 7, enwere ngwaọrụ pụrụ iche nke enwere ike iji maka njikwa ndị nne na nna. Ka anyị chọpụta otú ị ga-esi gbanwee ha, hazie ya, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịkwụsị ya.
E kwuru n'elu na ọrụ nlekọta ndị nne na nna na-adabere na ndị nne na nna gbasara ụmụaka, ma ihe ndị dị na ya nwekwara ike iji ya mee ihe maka ndị okenye. Dịka ọmụmaatụ, ọ ga-adị mkpa karịsịa iji usoro dị otú ahụ na ụlọ ọrụ iji gbochie ndị ọrụ na iji kọmputa n'oge awa azụmahịa maka ndị ọzọ karịa nzube ha.
Njirimara a na-enye gị ohere igbochi omume nke ụfọdụ arụmọrụ site na ndị ọrụ, kpachaara oge ha na-eji na kọmputa, ma gbochie ihe omume ndị ọzọ. Enwere ike igosipụta njikwa dị otú ahụ site na iji ngwaọrụ ndị e wuru ewu nke sistemụ arụmọrụ, yana iji ngwa ndị ọzọ.
Iji mmemme ndị ọzọ
E nwere ọtụtụ ihe omume nke atọ nke wuru na nne na nna nchịkwa. Nke mbụ, ọ bụ software antivirus. Ngwa ndị a gụnyere antiviruses ndị na-esonụ:
ESET Smart Nche;
SpaceWeb Nche Nchebe;
Kaspersky Internet Nche na ndị ọzọ.
N'ọtụtụ n'ime ha, ọrụ nlekọta nne na nna na-ebelata iji gbochie nleta na saịtị ndị na-ezute ụfọdụ njirimara, na mmachibido ịga leta weebụ na adreesị ma ọ bụ ụkpụrụ a kapịrị ọnụ. Ọzọkwa, ngwá ọrụ a na ụfọdụ antiviruses na-enye ohere igbochi mwepụta nke ngwa nke onye nchịkwa kwuru kpọmkwem.
Maka ama ndi ozo banyere ikike nke ndi nne na nna nke nke ọ bụla n'ime usoro mmemme nje, biko gbaso njikọ ahụ na nyocha ahụ a raara nye ya. Anyị nọ n'isiokwu a ga-elekwasị anya na ngwá ọrụ wuru Windows 7.
Kwado ngwá ọrụ
Mbụ, ka anyị hụ otu esi arụ ọrụ nke njikwa nna na-achịrịrịrị n'ime Windows 7 OS. Ị nwere ike ịme nke a site na ịmepụta akaụntụ ọhụrụ, nke a ga-ejikwa ya, ma ọ bụ site n'itinye àgwà dị mkpa na profaịlụ dị ugbu a. Ihe a chọrọ n'aka bụ na ya ekwesịghị inwe ikike nhazi.
Pịa "Malite". Pịa "Ogwe njikwa".
Ugbu a, pịa ihe odide "Akaụntụ Ndị Akaụntụ ...".
Gaa "Nne na Nna Control".
Tupu ịmalite ịmepụta profaịlụ ma ọ bụ ngwa nke njirimara nke ndị nne na nna na-esite na onye dị ugbu a, ị ga-enyocha ma à ga-eziga paswọọdụ na profaịlụ onye nchịkwa. Ọ bụrụ na ọ na-efu, mgbe ahụ ọ ghaghị itinye ya. N'aka nke ọzọ, nwatakịrị ahụ ma ọ bụ onye ọrụ ọzọ ga-abanye na akaụntụ nke ejiri ejiri ike banye na profaịlụ nke onye nchịkwa, si otú ahụ na-agafe ihe niile mmachibidoro.
Ọ bụrụ na ị nwere paswọọdụ maka profaịlụ onye nchịkwa, kpoo usoro ndị ọzọ iji wụnye ya. Ọ bụrụ na ịmebeghị nke a, wee pịa aha profaịlụ na ikike ikike. Na nke a, ị ghaghị ịrụ ọrụ na usoro ahụ n'okpuru akaụntụ ahụ akọwapụtara.
A na-arụ windo ebe a ga-akọ na profaịlụ onye nchịkwa enweghị paswọọdụ ọ bụla. Ọ na-ajụ ma ọ bụrụ na ọ bara uru ịlele maka okwuntughe ugbu a. Pịa "Ee".
Ohere meghere "Okwuntughe Admin Nzuzo". Na mmewere "Paswọdu ọhụrụ" tinye okwu ọ bụla ị ga-esi banye na usoro n'okpuru profaịlụ nke onye nchịkwa n'ọdịnihu. E kwesiri icheta na okwu mmeghe bu ihe kwesiri ihu. Na mpaghara "Nyochaa okwuntughe" ị ga-etinye kpọmkwem otu okwu ahụ dị ka ọ dị na mbụ ikpe. Mpaghara "Tinye ederede akara ngosi" adịghị achọrọ. Ịnwere ike ịgbakwunye okwu ma ọ bụ okwu ọ bụla na ya ga-echetara gị paswọọdụ gị ma ọ bụrụ na ịchefu ya. Ma, ọ dị mma ịtụle na ndị ọrụ niile ga-ahụ ihe ngosi a na-agbalị ịbanye na usoro ahụ n'okpuru profaịlụ. Mgbe ị banyere data niile dị mkpa, pịa "OK".
Mgbe nke a gasịrị, nlọghachi na windo ahụ pụtara. "Nne na Nna Control". Dịka ị nwere ike ịhụ, ọnọdụ nke onye nchịkwa onye nchịkwa ugbu a ka agbadoro ọnọdụ na-egosi na profaịlụ bụ paswọọdụ-echebe. Ọ bụrụ na ịkwesịrị ịrụ ọrụ ahụ n'okpuru ọmụmụ ihe na akaụntụ dị, wee pịa aha ya.
Na windo egosipụtara na ngọngọ ahụ "Nne na Nna Control" mee ka bọtịnụ redio si n'ọkwá "Gbanyụọ" na ọnọdụ "Kwado". Mgbe pịa nke a "OK". A ga-enyere ndị ikwu ya aka na profaịlụ a.
Ọ bụrụ na e mebeghị ka profaịlụ dị iche maka nwa ahụ, mezie nke a site na ịpị na windo ahụ "Nne na Nna Control" site na ndebanye "Mepụta akaụntụ ọhụrụ".
Nkiri windo nke profaịlụ meghere. N'ọhịa "Aha Akaụntụ Ọhụrụ" kọwaa aha achọrọ nke profaịlụ nke ga-arụ ọrụ n'okpuru njikwa nna. Ọ nwere ike ịbụ aha ọ bụla. Maka ihe atụ, anyị na-ekenye aha ahụ "Nwa". Mgbe pịa nke a "Mepụta akaụntụ".
Mgbe emechara profaịlụ, pịa aha ya na windo "Nne na Nna Control".
Na ngọngọ "Nne na Nna Control" tinye bọtịnụ redio na ọnọdụ "Kwado".
N'ihi ya, a na-enye ikike ndị nne na nna aka, ma n'eziokwu ọ dịghị egbochi ma ọlị ruo mgbe anyị haziri onwe anyị.
E nwere ụzọ atọ nke njedebe ntụziaka, nke egosiri na ngọngọ ahụ "Nhọrọ Windows":
Pịa na nke mbụ nke ihe ndị a.
Ohere meghere "Oge Ochie". Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ na-egosi otu eserese nke usoro ahụ na-emetụta ụbọchị izu, na ogidi na-anọchi anya oge na ụbọchị.
Site na ijigide bọtịnụ òké aka ekpe, ị nwere ike ịkọwapụta ụgbọelu nke eserese ahụ, nke pụtara oge oge a na-akwado nwa ahụ ka ọ rụọ ọrụ na kọmputa ahụ. N'oge a, ọ pụghị ịbanye. Dịka ọmụmaatụ, na foto dị n'okpuru ebe a, onye ọrụ nke na-edekọ n'okpuru profaịlụ nwatakịrị ahụ ga-arụ ọrụ na kọmputa site na Monday ruo Saturday naanị site na 15:00 ruo 17:00, na Sunday site na 14:00 ruo 17:00. Mgbe oge akara, pịa "OK".
Ugbu a gawa ngalaba "Egwuregwu".
Na windo nke meghere, site na ịgbanye bọtịnụ redio, ị nwere ike ịkọ ma onye ọrụ nwere ike igwu egwuregwu ọ bụla n'okpuru akaụntụ a ma ọ bụ enweghị ike. Ke akpa ikpe, mgbanwe na ngọngọ ahụ "Nwa nwere ike ịgba ọsọ?" ga-anọ n'ọnọdụ "Ee" (site na ndabara), na nke abụọ - "Mba".
Ọ bụrụ na ịhọrọ nhọrọ nke na - enye gị ohere igwu egwuregwu, ị nwere ike ịhọrọ ụfọdụ ihe mgbochi. Iji mee nke a, pịa edemede ahụ "Mee Egwuregwu Egwuregwu".
Nke mbụ, site na ịgbanwuo bọtịnụ redio, ịkwesịrị ịkọwa ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na onye nrụpụta enyeghị ụfọdụ ụdị egwuregwu ahụ. Enwere nhọrọ abụọ:
Nabata egwuregwu n'emeghi ụdị (ndabara);
Egwuregwu bọtịnụ na-enweghị ụdị.
Họrọ nhọrọ nke ga-eme ka afọ ju gị.
Na windo ahụ, gbadaa n'ihu. N'ebe a, ị ga-ezipụta oge egwuregwu nke afọ nke onye ọrụ nwere ike igwu egwu. Họrọ nhọrọ nke ruru gị aka site na ịtọ bọtịnụ redio.
N'ada ala ọbụna obere, ị ga-ahụ ndepụta dị ukwuu nke ọdịnaya, ịmepụta egwuregwu na ọnụnọ nke nwere ike igbochi. Iji mee nke a, nanị lelee igbe dị n'akụkụ ihe ndị kwekọrọ. Mgbe emechara ntọala niile dị na windo a, pịa "OK".
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmachi ma ọ bụ kwe ka egwuregwu ụfọdụ, ịmata aha ha, wee pịa caption "Iwu na ikike nke egwuregwu".
A windo meghere ebe ị nwere ike ịkọwa ikikere egwuregwu ka a gụnyere na nke na-abụghị. Na ndabara, nke a na-edozi site na ntọala ntọala nke anyị setịpụrụ na mbụ.
Mana ọ bụrụ na ịtọye bọtịnụ redio na-abụghị aha egwuregwu na ọnọdụ "Na-ekwe mgbe niile", mgbe ahụ enwere ike ịsonye ya n'agbanyeghị ihe mgbochi edobere na edemede. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ịtọ bọtịnụ redio na ọnọdụ "Akwụsịla mgbe niile", egwuregwu ahụ agaghị enwe ike ịrụ ọrụ ọbụna ma ọ bụrụ na ọ dabara ọnọdụ niile akọwapụtara na mbụ. Gbanye egwuregwu ndị ahụ na-agbanwe agbanwe na ọnọdụ "Dabere na ọkwa", ga-achịkwa naanị site na parameters ndị dị na window windo. Mgbe emechara ntọala niile, pịa "OK".
Ịlaghachi na windo njikwa egwuregwu, ị ga-achọpụta na n'ihu n'ihu nke ọ bụla, ntọala ndị eburu na mbụ na nkeji nkenke egosipụta. Ugbu a ọ na-anọgide na pịa "OK".
Mgbe ịlaghachiri na njikwa njikwa windo, gaa na ihe ikpeazụ nke ntọala - "Ịhapụ na igbochi mmemme ndị a kapịrị ọnụ".
Ohere meghere "Nhọrọ nke mmemme nke nwata nwere ike iji"E nwere naanị isi abuo n'ime ya, n'etiti nke a ga-eme site na ịmegharị mgbanwe ahụ. Ọnọdụ nke bọtịnụ redio na-ekpebi ma nwatakịrị ahụ pụrụ ịrụ ọrụ na mmemme ma ọ bụ naanị na ndị kwere ekwe.
Ọ bụrụ na ịtọ bọtịnụ redio ka ịkwado "Nwatakịrị nwere ike na-arụ ọrụ nanị site na mmemme ndị a kwadoro", ndepụta nke ngwa ga-emeghe, ebe ịkwesịrị ịhọrọ software nke ị na-ekwe ka iji n'okpuru akaụntụ a. Iji mee nke a, lelee igbe elele kwekọrọ na pịa "OK".
Ọ bụrụ na ịchọrọ igbochi ọrụ naanị na ngwa onye ọ bụla, yana na ndị ọzọ niile na ịchọrọ igbochi onye ọrụ ahụ, mgbe ahụ ị na-etinye ihe ọ bụla aka dị mma. Ma i nwere ike ime ngwa ngwa. Iji mee nke a, pịa ozugbo "Kwuo ihe niile", wee wepu aka na ntinye aka site na mmemme ndị ị na-achọghị ka nwatakịrị ahụ na-agba ọsọ. Mgbe ahụ, dịka mgbe niile, pịa "OK".
Ọ bụrụ na ihe kpatara nke a abụghị usoro ihe omume nke ịchọrọ ịhapụ ma ọ bụ gbochi nwa ahụ ịrụ ọrụ, enwere ike idozi ya. Pịa bọtịnụ ahụ "Nyochaa ..." n'aka nri nke edemede ahụ "Tinye usoro ihe omume a".
A windo mepee na ndekọ software ebe. Ị ga-ahọrọ faịlụ mmemme nke ngwa ahụ ịchọrọ ịgbakwunye na listi ahụ. Wee pịa "Meghee".
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-atụkwasị ngwa ahụ. Ugbu a, ị nwere ike ịrụ ọrụ na ya, ya bụ, kwe ka ị malite ma ọ bụ machibido, na ihe ndabere.
Mgbe ihe niile dị mkpa iji gbochie ma kwe ka e jiri ụfọdụ ngwa mee ihe, laghachi na windo njikwa njikwa. Dịka ị nwere ike ịhụ, n'akụkụ aka nri, ihe mgbochi kachasị anyị setịpụrụ na-egosipụta. Iji mee ka akụkụ ndị a niile dị irè, pịa "OK".
Mgbe nke a mechara, anyị nwere ike iche na ọ ga-emepụta ma gosipụta ihe profaịlụ nke njikwa nke ndị nne na nna.
Mana mgbe ụfọdụ ajụjụ na-ebili otu esi gbanyụọ njikwa ndị nne na nna. N'okpuru akaụntụ nwatakịrị a agaghị ekwe omume ime nke a, ma ọ bụrụ na ịbanye dịka onye nchịkwa, njedebe ga-abụ nke mbụ.
Na ngalaba "Nne na Nna Control" na "Ogwe njikwa" pịa aha profaịlụ nke ịchọrọ iji gbanyụọ njikwa.
Na windo meghere na ngọngọ ahụ "Nne na Nna Control" mee ka bọtịnụ redio si n'ọkwá "Kwado" na ọnọdụ "Gbanyụọ". Pịa "OK".
Ọrụ ahụ ga-enwe nkwarụ na onye ọrụ ahụ e jirila mee ihe tupu ya enwee ike ịbanye ma rụọ ọrụ n'ime usoro na-enweghị ihe mgbochi. Nke a gosipụtara na enweghị akara akara kwekọrọ na aha profaịlụ.
Ọ dị mkpa iburu n'obi na ọ bụrụ na ịghaghachite njikwa ndị nne na nna gbasara profaịlụ a, a ga-azọpụta ma gosipụta ihe niile edere na oge gara aga.
Ngwaọrụ "Nne na Nna Control"nke a na-ewu n'ime Windows 7 OS, nwere ike belata njedebe nke arụmọrụ achọghị na kọmputa site na ụmụaka na ndị ọrụ ndị ọzọ. Isi ntụziaka nke ọrụ a bụ njedebe nke iji PC na oge, iwuchibido ịkwalite egwuregwu niile ma ọ bụ nchịkọta nke ha, yana ihe mgbochi na mmepe nke ụfọdụ mmemme. Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ kwenyere na ike ndị a ezughị ezu iji chebe nwatakịrị, mgbe ahụ, dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike iji ngwaọrụ pụrụ iche nke ọgwụ nje virus iji gbochie nleta na saịtị na ọdịnaya achọghị.